/ Products / Zvepabonde Kuvandudza Hormones
Madzimai eweserogen, progesterone, uye testosterone zvinowanzopera nezera, kunyanya panguva uye shure kwekuguma kwemwedzi. Tsvaga nzira dzekuchengetedza zvepabonde yako kutengesa, kunyange mahomoni ako ari pasi. Uye, kune vamwe varume, pamwe chete nezera rinomuka, chirwere chepabonde chinoderera. Uye, kunyanya, vamwe varume vane dambudziko re erectile dysfunctial. Kuti ushandise mishonga yakakosha yekuita zvepabonde, vabatsire kunakidzwa noupenyu, kana hupenyu huri nani hwepabonde.
Kuva nekunetsa dambudziko nguva nenguva hakusi chikonzero chekufunganya. Kana kusagadzikana kwe erectile kuri kuramba kuripo, zvakadaro, kunogona kukonzera kushungurudzika, kunokanganisa kuzvidzora kwako uye kunobatsira kuve nezvinetso zvehukama. Matambudziko kuwana kana kuchengetedza kukwidza kunogonawo kuva chiratidzo chemuviri wehutano hunoda hutano uye hutano hwechirwere chemwoyo.
mishonga inonzi "nitrates" iyo inowanzonyatsorondedzerwa nokuda kwepfupa
Achiratidza 1-8 pamusoro 12 zvabuda